शिक्षामन्त्रीलाई खुला पत्रः के ले रोक्यो प्रभावकारी काम गर्न ? - Everest Dainik - News from Nepal
शिक्षामन्त्रीलाई खुला पत्रः के ले रोक्यो प्रभावकारी काम गर्न ?
दुई चार जिल्ला घुमेर माला लाउनुमै यो महत्वपुर्ण र छोटो समय नसकियोस्
शिक्षा मन्त्रि ज्यु ,
तपाईले मन्त्रालय सम्हालेको ४ महिना बितेछ । मन्त्रि भैसकेपछि ४२ औं दिनमा असोज २० गते तपाईले सार्वजनिक गरेको १९ बुदेँ तात्कालिन कार्ययोजना मेरो अगाडी छ । तपाई मन्त्रि हुदैँ गर्दा पुर्ववर्ति सरकारले पेश गरि संसदबाट पारित शिक्षा एेन आठौँ संशोधन बिधेयक र खुल्ला बिश्वबिधालय एेन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई कार्यान्वयनका लागी नियामावली निर्माण गर्न मन्त्रालय आईपुगेको थियो । सापेक्षिक रुपमा अन्य मन्त्रीहरुलाई भन्दा अनुकुल वातावरण तपाईलाई थियो । आफ्ना खास नेता गीरिराजमणि पोख्रेलको मन्त्रालयको बिरासत,पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रि,समुहका समेत नेता भनिने नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकार संचालन संयन्त्रका संयोजक र अर्थमन्त्रि महरा आफ्नै पार्टी नेता । त्यसबाहेक दर्जनौ नियुक्ति,बिश्वबिधालय र आयोगमा पुर्णता जस्ता चाखलाग्दा अबसर बोकेर तपाई जसरी मन्त्रालय छिर्ने कमैले मौका पाउथेँ । फेरी राष्ट्रिय राजनितिमा खास चर्चामा नरहेको पात्र भए पनि पहिले बिधार्थी आन्दोलनमा काम गरिसकेको,ईमानदार र सरल नेताका हिसाबले तपाईलाई स्नेह गर्नेहरु अलिक बढी नै आशाबादी पनि थिए ।
यति भुमिका यसकारण बाधेँ किनभने शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वका यी मध्यदिनहरुमा तपाईको प्राप्ताङ्क उर्तिणाङ्क तिर जाने देखिएन ।
तपाईसगँ खास गरि दुई अपेक्षा थियो । पहिलो कुरा पुर्ववर्ती मन्त्रिको १८ बुदेँ प्रतिबद्धता पत्रको जगमा शिक्षा क्षेत्रको आमुल परिवर्तनको नितिगत नेतृत्व र संघिय संबिधानको मौलिक हकका रुपमा रहेको शिक्षा लाई पुर्नसंरचना गरी समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नितिका तय गर्न दिशानिर्देश गर्ने, सो का लागी आयोग निर्माण गर्ने,दोस्रो नियमावलिहरुलाई पुर्णता दिई कार्यान्वयनमा लैजाने ।
१. १९ बुदेँ कार्ययोजनाको पहिलो बुदाँमा रहेको समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय निति निर्माण गर्न एक उच्चस्तरिय आयोग १ महिना भित्र निर्माण गर्ने कार्यतालिका कता हरायो ? आयोग निर्माणको बाधक को हो ? प्रधानमन्त्रि प्रचण्ड वा सरकार संचालन संयन्त्र संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठ वा आन्तरिक रुपमा शिक्षामन्त्रालय हेरिरहेका पुर्व शिक्षामन्त्रि गीरिराजमणी पोख्रेल या तपाई स्वंयको असक्षमता ?
२.कार्ययोजनाको दोस्रो बुदाँमा रहेको शिक्षा एेन नियामावलि कार्तिक २५ सम्ममा सम्पन्न गरिने भनिएकोमा मुस्किलले २ साता अगाडी सहमतिलाई अर्थ मन्त्रालय पठाईएको र झण्डै २६ अर्ब आवश्यक रकमको सहमति मागमा जम्मा १ अर्ब दिन अर्थ तयार रहेकाले नियमावलि भुण्रमै तुहिने खतरा रहेको छ । एेन ल्याउदाका नेतृत्वकर्ता पुर्वमन्त्रिले त अर्थमन्त्रिका नाउँमा पत्रै लेखि सरोकार ब्यक्त गरेका छन् । पत्र अर्थ मन्त्रिका नाउँमा भए पनि पेटबोलिले बर्तमान शिक्षामन्त्रिको कार्यदक्षता माथि समेत प्रश्न उठाएको छ । एकै पार्टीका प्रधानमन्त्रि र अर्थमन्त्रि हुदाँ पनि नियामावलिमा सहमति जुटाउने लबिङ गर्न नसक्नुको खास कारण के होला ?
‘अघिल्लो बर्ष पनि निर्माणको बजेट नपाएका जिल्ला र थप गरि ३१ जिल्लाका बिधालय मन्त्रालयको मुख हेरि टोलाउदै छन् ।’
३. तेस्रो बुदाँमा रहेको अलग अलग एेनद्धारा संचालित बिश्वविधालय बीचमा समन्वय गर्न र उच्चशिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने र उच्च शिक्षा बिधयेक संसद लगिने कुरा मन्त्रीकै कोर टिममा एकमत हुन नसके पछि यसै थन्किरहेको छ । यो बिधयेक टेबुल नहुनाको कारण के होला ?
४. बुदाँ नं ४ को भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका बिधालय निर्माण अभियान कहाँ हरायो । शिक्षा बिभागले यस बर्ष भुकम्प प्रभावित ३१ जिल्लमा बिधालय निर्माणको कुनै कार्यक्रम राखेन । मन्त्रालयकै सह सचिवको नेतृत्वमा रहेको सि यल् पि यु ले झण्डै ४ अर्वको बजेटका साथ एन्अाए सगँ समन्वय गरि संचालन गरिने भनिएको बिधालय पुर्ननिर्माण अभियान यसै अलपत्र छ । अघिल्लो बर्ष पनि निर्माणको बजेट नपाएका जिल्ला र थप गरि ३१ जिल्लाका बिधालय मन्त्रालयको मुख हेरि टोलाउदै छन् । प्राथमिकताका साथ निर्माण कार्य नहुनुको कारण के होला ?
५. बुदाँ ५ मा रहेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा बिधयेक’ पारित गराउन मन्त्रालयको कुनै चासो देखिदैन । बरु बिचमा सिर्जित गोविन्द के.सी अनसन र डिन बिबादले उल्टै मन्त्रीको साख घटाएको छ ।
‘मन्त्रीको प्रभावकारी कदमको बाटो हेरेका कर्मचारी हिस्स परेका छन् ।’
६. बुदाँ नम्बर ६ अनुसार ‘ शिक्षकको हातमा डिजिटल पाठ्यक्रम र बिधार्थीको झोलामा रगिंन पुस्तक’ मिठै गफ बन्यो । यसै शैक्षिक सत्रको अन्तिम परिक्षाको तयारी सुरु हुदैँ गर्दा बिधार्थी हातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन । आगामि शैक्षिक सत्रमा पनि समयै पुस्तक पुर्याउन जनक शिक्षाको सक्षम नेतृत्व चयन, कार्ययोजना मन्त्रिको प्राथमिकतामा छैन् । अहिले जनक पुगेर तयारी हेर्दा यति कुरा निश्चिताका साथ भन्न सकिन्छ कि ७० प्रतिसत पुस्तक समेत समयमा तयार हुनेवाला छैन् । नयाँ मेसिन किन्ने काम र सक्षम ब्याबस्थापकिय नेतृत्व छनौट किन गर्न गाह्रो परेको होला ? ६ महिना भित्र टुङ्गो गर्ने भनिएको नेसनल क्वालिफिकेसन फेर्मवर्कको ३ महिना बितिसक्दा पनि सिन्को नभाँचिनु को कारण के होला ?
७. बुदाँ नम्बर १३ को प्राबिधिक शिक्षाको बिस्तारको पहिलो गासँमै ढुङ्गो मिलेको छ । पोलिटेक्निक शिक्षालय निर्माणको नितिगत निर्णय भएनि बजेट र कार्यान्वयन बारे शंकाको स्थिति छ । सिटीईभिटी कार्यकारी नेतृत्व बिहिन छ । एक महिना हुदाँ पनि सर्च कमिटीले सदस्यसचिवको नाम सिफारिस गरेको छैन् । परिषद्को बैठकमा मन्त्रीका एेजेण्डा अस्विकृत हुने स्थिति छ । मन्त्रीको प्रभावकारी कदमको बाटो हेरेका कर्मचारी हिस्स परेका छन् । परिषद्को मात्रै २७०० बढी सम्बन्धनका १० औ बर्ष देखिका निवेदन र धरौटी अलपत्र छन् । पुर्वाञ्चल, पोखरा र टियुका प्राबिधिक कार्यक्रमका सम्बन्धका लागी परेका निबेदनको चाङ पनि डर लाग्दो छ । तर यसलाई छिच्चोल्ने गरि नेतृत्व गर्न तपाईलाई कसले रोक्छ ।
काम गर्न नसकिने रैछ भने कारण खुलाएर बरु राजिनामा दिनुस्
ब्यातिगत रुपमा तपाईको गृह जिल्लाबासी र तपाईलाई श्रद्धा गर्ने पात्रको नाताले यति भने । सुनेका छौ आजकल तपाईलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रियजनहरुको पनि साथ छैन रे तपाईलाई ! ख्याल राख्नु होला । यस्तो मिठो पक्कै होईन । तपाई सफल हुदाँ तपाईको चर्चा र हाईहाई त पक्कै होला थोरै खुशी हाम्लाई नि मिल्ला तर तपाई असफल हुदाँ बढी पिडामा हुनेछौ । नत्र मन्त्रि बनेर नाम लेख्ने अनि दुई चार जिल्ला सपत्नि घुमेर माला लाउनुमै यो महत्वपुर्ण र छोटो समय नसकियोस् । काम गर्न नसकिने रैछ भने कारण खुलाएर बरु राजिनामा दिनुस् तर अकर्मन्य मन्त्रिको धब्बा तपाईलाई नलागोस् । शुभकामना
याे पनि पढ्नुस पहिलोपटक राजनीतिक अभियान बन्दै विद्यार्थी भर्ना अभियान
ट्याग्स: dhaniram poudel, ministry of education